Izinkampani ezinkulu ziyahlangana zithanda ubumfihlo | Izindaba zamagajethi
Izinkampani zeTech ziyahlangana zithanda ubumfihlo bomsebenzisi
UPablo Aparicio | | General
Apple Kuyizindaba ezibalulekile futhi kuzo zonke izinhlobo zemidiya yezindaba. Kepha manje akungenxa yokuthi sebethule umshini wokwephula umthetho noma bephule irekhodi elisha, uma kungengenxa yento ehluke kakhulu: ukubhekana nohulumeni wase-US vikela ubumfihlo wabasebenzisi ngaphezu kwakho konke. Futhi uma ngithi "ngaphezu kwakho konke" kungaphezu kwakho konke, ngoba abazimisele ukunikela ngengalo yabo ukuze basonte yize i- FBI cela usizo lwabo ekuvuleni i-iPhone 5c yesifinyezo esibhekene nesenzo sobuphekula esiholele ekufeni kwabantu abayi-14.
Inkulumompikiswano okwamanje isetafuleni phakathi kwalabo abavikela ukubaluleka kobumfihlo (kwedatha futhi bavimbele ukufinyelela kwikhamera nakumbhobho womakhalekhukhwini) nalabo abakholelwa ukuthi ubumfihlo ukuphepha kubaluleke kakhulu. Kepha yini okufanele yenziwe yi-Apple? Imithombo yezindaba eminingi iyavuma ukuthi kufanele yenze izinto zibe lula ekusetshenzisweni komthetho, kepha akusikho ukuthi izinhlangano ezahlukahlukene ezimele amalungelo abasebenzisi zicabangani.
1 I-FBI icela i-Apple ukuthi ivule i-iPhone 5c ku-sniper
2 UTim Cook uphendula ngencwadi evulekile
3 Izinkampani ezinkulu zibumbene zithanda ubumfihlo bomsebenzisi
I-FBI icela i-Apple ukuthi ivule i-iPhone 5c ku-sniper
Konke (noma cishe yonke into) kuqala lapho i-FBI ibeka izandla zayo ocingweni olulahlekile lwesitha. Bafuna indlela yokuthola ubushokobezi, bacela i-Apple ukuthi yenze ifayela le- isoftware ekhethekile ukuze bakwazi ukuvula i-iPhone 5c futhi ngaleyo ndlela ufinyelele kulwazi lomuntu siqu lomuntu owonile.
UTim Cook uphendula ngencwadi evulekile
Impendulo ibishesha. Inkampani yaseCupertino yaphendula isicelo se-FBI ku incwadi evulekile isayinwe yi-CEO ye-Apple, Tim Cook, lapho baqinisekisa khona ukuthi ukuvuma isicelo se-FBI kungaba yisibonelo esizosongela ukuphepha kwamakhasimende abo ngomthelela "kude kakhulu nomthetho". U-Apple ugcizelele ukuthi i-FBI ibacele ukuthi bakhe into eyingozi kakhulu: a umnyango ongemuva. Kepha, njengoba behlale begcina eCupertino, le minyango ngeke isetshenziswe ngabomthetho kuphela, kepha kuzoba yisikhathi nje ngaphambi kokuba abasebenzisi abanonya babaxhaphaze.
Ngokwencwadi esayinwe nguTim Cook, uhulumeni wase-US uthi u-Apple uyakholelwa isoftware ekhethekile yecala le-sniper, kodwa inkampani yama-apula icabanga ukuthi abasebenzisi abaningi bacabangani, ukuthi akunakwenzeka ukuqinisekisa ukuthi le software ngeke isetshenziselwe ukufinyelela kwamanye amadivayisi nokuthi ukuyakha kuzoba yisibonelo esiyingozi kumacala ezomthetho azayo.
Izinkampani ezinkulu zibumbene zithanda ubumfihlo bomsebenzisi
Selokhu uTim Cook ashicilele incwadi yakhe evulekile, aziziningi izinkampani nezinhlangano zobuchwepheshe ezimjoyinile empini yakhe yokulwa nohulumeni wase-US. Edward Snowden ishicilele uchungechunge lwe tweets lapho aqinisekisa khona ukuthi okwenziwe yi-Apple ngasese kuyinto ebaluleke kakhulu eyenziwe ngabasebenzisi kule minyaka eyishumi edlule, ngasikhathi sinye lapho egxeka khona -Google ngokungakwenzi okufanayo. Kepha, ngemuva nje kwalokho, i-CEO yenkampani eseyingxenye yama-Alphabet manje ishicilele eziningana tweets ukusekela uTim Cook. Okokugcina, i-RGS iphinde yashicilela isitatimende lapho iqinisekisa khona ukuthi bayatholakala emandleni ezomthetho, inqobo nje uma benza izicelo zomthetho futhi behlonipha ubumfihlo babasebenzisi.
Izinkampani eziHlola uHulumeni weReform zikholelwa ukuthi kubaluleke kakhulu ukunqanda amaphekula nezigebengu nokusiza abomthetho ngokucubungula izicelo zomthetho zolwazi ukusigcina siphephile. Kepha izinkampani zobuchwepheshe akufanele zidingeke ukuthi zenze iminyango emuva kubuchwepheshe obugcina imininingwane yomsebenzisi iphephile. Izinkampani ze-RGS zihlala zizibophezele ekuhlinzekeni ngosizo lomthetho oludingayo ngenkathi zivikela ukuphepha kwamakhasimende azo nemininingwane yazo.
Kumele kuqashelwe lokho isihloko sibucayi. Ngokubona kwami, izigebengu zihlala zithola indlela yokwenza ubugebengu bazo futhi nokuhlinzeka abezomthetho ngendlela yokufinyelela kumadivayisi eselula ngeke kuzimise. Ekugcineni, njengenjwayelo, ukuphela kwalabo abanokuthile abazokulahla abasebenzisi abangahlose ukwenza noma yiliphi icala, futhi silahlekelwa okuthile okufanele kusikhathalele: ubumfihlo bethu. Kungaleso sizathu-ke ngikholelwa ukuthi i-Apple nazo zonke izinkampani ezisekela isikhundla sayo zisebenza ngendlela efanele. Ngoba uma sebebuthene ndawonye ukuzuzisa abasebenzisi futhi tweets ngesishoshovu esidumile u-Edward Snowden kuqinisekisa kuphela ukubaluleka kwalokho i-Apple esekuqalile.
Uma bekubuza: ubungathini? Ngabe uku-Apple noma i-FBI?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izinkampani zeTech ziyahlangana zithanda ubumfihlo bomsebenzisi
Ukubuyekezwa kwe-Acer Revo One RL85, iPc mini ene "mini" encane